Uyisebenzisa njani iMowudi ye-Incognito yeYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngaba uyazi ukuba i-YouTube ibandakanya imo ye-incognito phakathi kwemisebenzi yayo? Ukuba awazi ukuba sithini na esi sixhobo kwaye siyenzela ntoni, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo apho siza kuchaza ukuba yeyiphi imo ye-incognito ye-YouTube emalunga nokuba singayisebenzisa njani kwimizuzu embalwa.
Le yenye ye Ezona zixhobo zilungileyo zibonelelwa sisicelo seYouTube kwaye oko kusebenza ngokungashiyi mkhondo kumxholo esiwujonga ngeqonga elidumileyo lokusasaza ividiyo. Hlala nathi kwaye ufunde ukusebenzisa eli nqaku limangalisayo.
Yintoni imo ye-incognito ye-Youtube
I-YouTube kutshanje iphehlelele olu khetho lutsha kwizicelo zalo eziphathwayo kwaye abasebenzisi banokuyivula bayicime nangaliphi na ixesha abafuna ngalo. Imowudi ye-incognito isetyenziselwa ukuthintela iqonga ekugcinweni kwembali yazo zonke iividiyo esizijongayo eqongeni.
Xa sisebenzisa imowudi ye-incognito ye-Youtube siya kuthi thintela imbali yevidiyo ukuba igcinwe kwisixhobo sethu esiphathwayo esizala ngokutsha. Kwakhona susa konke ukwenza ngokwezifiso.
Ithetha ntoni le nto? Siza kuthintela usetyenziso lweYouTube ukuqala cebisa umxholo ofana naleyo besiyijongile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo eqongeni. Ngoku iingcebiso ezenziwe yiYouTube ziya kuba yinto eqhelekileyo.
Nje ukuba imowudi ye-incognito yeYouTube isebenze nayo siyakuphepha ukubukela iividiyo zamajelo esibhaliselwe kuwo. Oku kuyenzeka kuba Imirhumo, i-Inbox kunye neethab zeThala lencwadi zikhubazekile xa kusebenze eli nqaku.
Amanyathelo okuvula imowudi ye-incognito
Kakuhle kakhulu. Ngoku ukuba siyazi ukuba imowudi ye-incognito ithetha ntoni kwaye yeyantoni, siza kukufundisa Eyona ndlela ilula kwaye ikhawulezayo yokwenza esi sixhobo sinomdla edibanise iYouTube kwisicelo sayo esiphathwayo.
Into yokuqala yokucacisa kukuba Eli nqaku livunyelwe kuphela kwi-app yeselfowuniOko kukuthi, asizukuyenza isebenze kwinguqulelo yedesktop. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Uya ngokuzenzekelayo kwimenyu yeAkhawunti. Apho uya kuba nakho ukufikelela kukhetho olwahlukeneyo lwe ukuseta.
Ngoku kufuneka ucofe ukhetho "Nika amandla imo ye-incognito"
Ungayikhubaza njani imo ye-incognito
Ngaba ukufumene kulula kakhulu ukwenza imowudi ye-incognito? Le yindlela elula kwaye ekhawulezayo kuya kuba kungasebenzi esi sixhobo Ukusuka kwisicelo esiphathwayo. Apha sichaza amanyathelo ngamanyathelo ekufuneka elandelwe:
Vula isicelo seYouTube esikwiselfowuni yakho
Uya kuqaphela ukuba ifoto yakho yeprofayile ayisabonakali kwiscreen. Endaweni yayo kuya kubakho isimboli yemowudi ye-incognito.
Cofa kuloo icon kwaye ukhethe "Khubaza imo ye-incognito"
Yindlela ekhawulezayo oya kuthi uphume ngayo kwimowudi ye-incognito Kwaye ngoku isicelo siza kuqala ukugcina yonke imbali yeevidiyo ozijongileyo ngokusetyenziswa kweselfowuni.
1 Yintoni imo ye-incognito ye-Youtube
2 Amanyathelo okuvula imowudi ye-incognito
3 Ungayikhubaza njani imo ye-incognito